Inona ny atao hoe MarTech? Teknolojia marketing: lasa, ankehitriny ary ho avy | Martech Zone
Mety hahazo tsikombakomba amiko ianao manoratra lahatsoratra ao amin'ny MarTech taorian'ny namoahana lahatsoratra 6,000 momba ny haitao marketing nandritra ny 16 taona (mihoatra ny taonan'ny bilaogy… teo amin'ny bilaogera teo aloha aho). Mino aho fa mendrika ny mamoaka sy manampy ireo matihanina amin'ny fandraharahana hahatakatra bebe kokoa ny momba ny MarTech, ny ankehitriny ary ny hoavin'ny ho avy.
Voalohany, mazava ho azy, dia izay MarTech dia portmanteau ny marketing sy ny haitao. Tsy nanararaotra nanararaotra naka ilay teny… Nampiasaiko aho MarketingTech nandritra ny taona maro talohan'ny namerenako ny tranokalako aorian'ny MarTech dia noraisina manerana ny indostria.
Tsy azoko antoka hoe iza no tena nanoratra io teny io, fa tena manaja an'i Scott Brinker aho izay tena manan-danja tokoa amin'ny fakana ny teny mahazatra. Scott dia hendry noho izaho… namela taratasy iray izy ary namela vitsivitsy aho.
Martech dia mihatra amin'ny fandraisana andraikitra lehibe, ezaka ary fitaovana manamboatra teknolojia hahatratrarana tanjona sy tanjona kendrena.
Ity misy horonantsary tsara avy amin'ny namako ao Element Three izay manome famaritana horonan-tsary fohy sy tsotra momba ny What Is Martech:
Mba hanomezana topy maso dia tiako ampidirina amin'ny:
Ny tantaran'ny MarTech: MarTech Past
Ny fanjakan'ny MarTech: MarTech ankehitriny
Ny MarTech Landscape
Inona no atao hoe MarTech Stack?
Ahoana no ahatongavan'i MarTech mihoatra ny asan'ny data Marketing?
Ahoana ny fahombiazan'ny mpivarotra MarTech sy ny fahaiza-manaony ilaina?
Ahoana ny fandrosoan'ny MarTech amin'ny marketing?
Ny hoavin'ny MarTech: MarTech Future
Matetika izahay mieritreritra an'i MarTech ankehitriny ho vahaolana miorina amin'ny Internet. Hifamaly aho fa ny haitao ara-barotra mihitsy no nialoha ny terminology ankehitriny. Tany am-piandohan'ny taona 2000 dia nanampy ireo orinasa toy ny New York Times sy ny Toronto Globe and Mail fananganana trano fitehirizana tahiry terabyte aho amin'ny alàlan'ny fitrandrahana, fanovana ary enta-mavesatra (ETL) fitaovana. Nampifangaroinay ny data transactional, data demographic, data geographic, ary loharanom-pahalalana marobe ary nampiasa ireto rafitra ireto hanontany, handefa, hanaraka ary handrefesana ny dokam-barotra amin'ny famoahana boky, ny fanaraha-maso ny telefaona, ary ny fanentanana mailaka mivantana.
Ho an'ny famoahana dia niasa tao amin'ny Gazety aho taorinan'ny nialan'izy ireo avy tamin'ny milina firaka voavolavola ho amin'ny takelaka niasa simika izay nisy ny fiheverana nirehitra tao amin'izy ireo tamin'ny fampiasana jiro mahery vaika sy lafy ratsy, avy eo LED sy fitaratry ny solosaina. Nanatrika an'ireny sekoly ireny (tany Mountain View) aho ary nanamboatra izany fitaovana izany. Ny fizotry ny famolavolana ka hatramin'ny pirinty dia niomerika tanteraka… ary izahay dia sasany tamin'ireo orinasa voalohany nifindra tamin'ny fibre mba hamindra ireo fisie pejy be dia be (izay mbola indroa ny vahaolana amin'ny mpanara-maso farany ambony ankehitriny) Ny vokatray dia mbola natolotra tamin'ny efijery… ary avy eo dia nankany amin'ny milina fanontam-pirinty.
Ireo fitaovana ireo dia niavaka tokoa ary ny teknikanay dia teo amin'ny sisin'ny rà. Ireo fitaovana ireo dia tsy mifototra amin'ny rahona na koa SaaS tamin'izany fotoana izany… fa tena niasa tamin'ny sasany amin'ireo kinova miorina amin'ny tranokala momba ireo rafitra ireo ihany koa aho, nampiditra ny angona GIS hametahana ireo angona momba ny ankohonana ary hanangana fanentanana. Nifindra avy amin'ny famindrana zanabolana ny data ka hatramin'ny tambajotra ara-batana, amin'ny fibre intranet, amin'ny internet. Folo taona taty aoriana, ary ireo rafitra sy teknolojia niasa rehetra ireo dia mifototra amin'ny rahona ankehitriny ary mandray ny haitao web, mailaka, dokam-barotra ary teknolojia marketing amin'ny finday hifandraisana amin'ny be sy ny maro.
Ny tsy nanananay taloha dia ny hifindra any amin'ny rahona miaraka amin'ireo vahaolana ireo dia ny fitehirizana, ny bandwidth, ny fahatsiarovana ary ny angovo. Miaraka amin'ny vidin'ny plummeting mpizara sy ny fiparitahan'ny fantsom-pifandraisana bandwidth, Software toy ny Service (SaaS) teraka… tsy mbola niherika isika! Mazava ho azy fa tsy mbola nandray ny tranonkala, mailaka ary finday tanteraka ny mpanjifa tamin'izany… ka ny vokatray dia nalefa tamin'ny alàlan'ny haino aman-jery fampielezam-peo sy ny pirinty ary ny mailaka mivantana. Natokana ho an'ny tsirairay mihitsy aza izy ireo.
Indray mandeha aho dia nipetraka tamin'ny resadresaka nifanaovana tamina tompon'andraikitra iray izay nilazany hoe: “Namorona marketing nomerika izahay tamin'ny ankapobeny…” ary nihomehy mafy aho. Ny paikady ampiasaintsika anio dia nihena ary nanjary tsotra kokoa noho ny fony mbola teknisiana teknolojia aho, saingy aleo hazava tsara fa ny fizotrany, ny lamina ary ny fanao amin'ny famoahana varotra be pitsiny dia nitranga taona maro talohan'ny nidiran'ny orinasa iray niditra tamin'ny Internet. Ny sasany taminay (eny, izaho…) dia teo rehefa niasa tamin'ny fanentanana tamin'ny alàlan'ny rindrambaiko maintso… na nanokatra varavarankely mpizara avy eo amin'ny toeram-piasantsika. Ho anao ry zalahy tanora… rahona mihazakazaka ao anatin'ny orinasa misy anao ny terminal / ny toeram-piasanao dia ny mpizaha ary ny angovo fitehirizana sy ny computing rehetra dia tao amin'ny mpizara.
Miitatra ireo orinasa fifandraisana amin'ny mpanjifa, dokam-barotra, fitantanana hetsika, content marketing, fitantanana traikefa amin'ny mpampiasa, media marketing sosialy, fitantanana laza, mailaka barotra, finday-barotra (tranonkala, fampiharana, ary SMS), automatisation marketing, fitantanana angona marketing, angon-drakitra lehibe, Analytics, ecommerce, fifandraisana amin'ny vahoaka, fivarotana enablement, ary varotra fikarohana. Traikefa vaovao sy teknolojia mipoitra toy ny zava-misy nampitomboina, zava-misy virtoaly, zava-misy mifangaro, faharanitan-tsaina artifisialy, fanodinana ny fiteny voajanahary, ary maro hafa no mahita ny làlan'izy ireo amin'ireo sehatra efa misy sy vaovao.
Tsy haiko hoe ahoana no naharetan'i Scott an'io, saingy nanara-maso ny fitomboana haingana an'ity orinasa ity izy nandritra ny folo taona… sy androany MarTech tontolon'ny manana orinasa 8,000 mahery ao.
Na dia mizara ny tontolo mifototra amin'ny andraikitra ara-barotra aza i Scott, dia somary manjavozavo kely ny tsipika momba ny sehatra sy ny fahaiza-manaony fototra. Ireo mpivarotra dia mivondrona sy mampifangaro ireo sehatra ireo raha ilaina amin'ny fananganana, fanatanterahana ary fandrefesana ny fampielezan-kevitra amin'ny marketing amin'ny fahazoana, fivarotana ary fitazonana ny mpanjifa. Ity fanangonana ny sehatra ity sy ny fampidirana azy ireo dia fantatra amin'ny hoe MarTech Stack.
A MarTech Stack dia ny fanangonana ireo rafitra sy sehatra ampiasain'ny mpivarotra amin'ny fikarohana, paikady, fanatanterahana, fanatsarana ary fandrefesana ny fizotry ny varotra ataon'izy ireo mandritra ny dia ataon'ny mpanjifa sy amin'ny alàlan'ny androm-piainan'ny mpanjifa.
Ny Martech Stack dia matetika mampiditra sehatra SaaS manana fahazoan-dàlana sy fampidirana fananana mifototra amin'ny rahona hanamboarana ny angon-drakitra ilaina mba hanomezana izay ilaina rehetra hanohanana ny ezaky ny varotra an'ny orinasa. Androany, ny ankamaroan'ny orinasa MarTech Stacks dia mamela zavatra betsaka tadiavina, mandany fotoana betsaka amin'ny fampandrosoana ho an'ny fampidirana sy mpiasa ny orinasa mba hananganana sy hametrahana ny fampielezan-kevitr'izy ireo amin'ny marketing.
MarTech dia manitatra mihoatra ny marketing
Fantatray koa fa ny fifandraisana amin'ny prospecta na mpanjifa rehetra dia misy fiantraikany amin'ny ezaka ara-barotra ataonay. Na mpanjifa mimenomenona amin'ny tambajotra sosialy, fahatapahana serivisy, na fitadiavana olana… amin'ny tontolon'ny media sosialy, ny traikefan'ny mpanjifa izao dia antony iray lehibe amin'ny fiantraikan'ny ezaka ara-barotra sy ny lazanay amin'ny ankapobeny. Noho io antony io, MarTech dia manitatra mihoatra ny ezaky ny marketing ary ankehitriny dia mampiditra ny angon-drakitra ho an'ny mpanjifa, ny varotra, ny kaonty ary ny fampiasana azy mba hanomezana anarana vitsivitsy.
Ireo orinasam-pandraharahana toa ny Salesforce, Adobe, Oracle, SAP, ary Microsoft izay manamboatra sombintsombiny amin'ny habaka MarTech dia mahazo orinasa haingana, mampiditra azy ireo ary manandrana manangana sehatra afaka manompo ny mpanjifany hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Misavoritaka ihany anefa. Ny fampidirana rahona marobe ao amin'ny Salesforce, ohatra, dia mitaky mpiara-miasa Salesforce efa za-draharaha izay nahavita izany amina orinasa am-polony. Ny fifindra-monina, ny fampiharana ary ny fampidirana ireo rafitra ireo dia mety maharitra amam-bolana… na taona maro mihitsy aza. Ny tanjon'ny mpamatsy SaaS dia ny hanohy hampitombo ny fifandraisan'izy ireo amin'ny mpanjifany ary hanome azy ireo vahaolana tsara kokoa.
Inona no vokatr'izany eo amin'ireo mpivarotra?
Mba hitrandrahana ny MarTech, ny mpivarotra ankehitriny dia matetika mifanindry amin'ny fahaizana mamorona, mandinika ary ara-teknolojia handresena ireo fetra sy fanamby takian'ny ankamaroan'ny sehatra teknolojia marketing. Ohatra, ny mpivarotra mailaka iray dia tsy maintsy miahiahy amin'ireo fotodrafitrasa misy eo amin'ny sehatry ny fanamarinana ny fahitana azy, ny fahadiovan'ny data ho an'ny lisitry ny mailaka, ny talenta famoronana amin'ny fananganana sanganasa fifandraisana mahatalanjona, ny fahaizan'ny mpanoratra amin'ny famoronana votoaty izay manosika ny mpamandrika hanao hetsika, fahaiza-mandanjalanja amin'ny fandikana clickthrough sy fiovam-po. data, ary… kaody izay manome traikefa tsy tapaka manerana an'ireo mpanjifan'ny mailaka marobe sy karazana fitaovana. Yikes… izay indrindra ny talenta ilaina… ary mailaka fotsiny izany.
Ireo mpivarotra ankehitriny dia tsy maintsy mahay mandanjalanja, mamorona, mahazo aina amin'ny fanovana, ary mahatakatra ny fomba fandikana tsara ny angona. Tokony hitandrina tsara amin'ny hevitry ny mpanjifa izy ireo, ny olan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa, ny mpifaninana aminy ary ny fampidiran'ny ekipan'ny varotra azy ireo. Raha tsy misy ireo andry ireo dia azo inoana fa miasa amin'ny fatiantoka izy ireo. Na, tsy maintsy miankina amin'ny loharano ivelany afaka manampy azy ireo izy ireo. Raharaham-barotra nahazoam-bola izany ho ahy tato anatin'ny folo taona lasa!
Ahoana no vokatr'izany eo amin'ny marketing?
Ny MarTech androany dia naparitaka mba hanangonana angon-drakitra, hampivelatra ny mpihaino kendrena, hifampiresaka amin'ny mpanjifa, handrafitra sy hizarana atiny, hamantatra sy hanao laharam-pahamehana ny fitarihana, hanara-maso ny lazan'ny marika iray, ary hanaraka ny vola miditra sy ny firotsahana amin'ireo fampielezan-kevitra isaky ny salantsalany sy fantsona… ao anatin'izany ireo fantsom-barotra mahazatra. Ary na dia misy fantsom-pirinty nentim-paharazana sasany aza mety mampiditra kaody QR na rohy azo arahana, ny fantsona nentim-paharazana sasany toy ny takelaka fanoratana dia lasa nomerika sy tafiditra tanteraka.
Tiako ny milaza fa ny marketing ankehitriny dia be pitsiny kokoa noho ny am-polony taona lasa izay… manome hafatra ara-potoana sy mifanaraka izay raisin'ireo mpanjifa sy orinasa. Mandainga aho. Ny varotra androany dia tsy misy fiaraha-miory amin'ireo mpanjifa sy orinasa tototry ny hafatra. Rehefa mipetraka eto aho dia manana mailaka 4,000 mbola tsy novakiana ary tsy misoratra anarana amin'ireo lisitra am-polony izay nosafidiko aho nefa tsy nahazo alalana isan'andro.
Na dia manampy antsika amin'ny fizarana tsaratsara kokoa aza ny fianarana milina sy ny faharanitan-tsaina artifisialy, dia manaparitaka ireo vahaolana ireo ny orinasa, manangona angon-drakitra an-jatony izay tsy fantatry ny mpanjifa akory, ary - fa tsy mandahatra tsara ny hafatr'izy ireo - dia manafika azy ireo hafatra bebe kokoa.
Toa ny varotra nomerika mora vidy kokoa, no vao mainka mandoka ny tsy fahombiazan'ny mpihaino kendrena na dokam-barotra momba ny fantsom-pifandraisana isaky ny fantsona hitan'izy ireo hahatratra ny vinan'izy ireo na aiza na aiza no ivoahan'ny masony.
MarTech: Ho avy
Ny tsy fitandreman'i MarTech dia manenjika orinasa, na izany aza. Ny mpanjifa dia mitaky fiainana manokana sy bebe kokoa, fampandehanana fampandrenesana, fitaterana an-keriny kokoa ny SPAM, fametrahana adiresy mailaka vonjimaika sy faharoa. Hitanay fa manomboka manakana ny cookies ny mpanamory, manakana ny fanarahan-dia ireo fitaovana finday ary ireo sehatra manokatra ny fahazoan-dàlan'izy ireo hahafahan'ny mpanjifa mifehy tsara kokoa ireo angona voaray sy ampiasaina hanohitra azy ireo.
Mampihomehy, mijery fantsom-barotra mahazatra aho izay miverina. Ny mpiara-miasa amiko izay mihazakazaka CRM be pitsony sy sehatra marketing dia mahita fitomboana bebe kokoa sy taham-pahombiazana bebe kokoa miaraka amin'ireo programa mailaka mivantana. Na dia lafo kokoa aza ny boaty ara-batana hidiranao, tsy misy sombintsombiny SPAM 4,000 ao!
Mirongatra ny fanavaozana ny teknolojia marketing dizitaly satria ny rafitra sy ny haitao dia manamora ny fananganana, fampidirana ary fitantanana sehatra. Rehefa sendra nandany vola an'arivony dolara isam-bolana tamin'ny mpamatsy mailaka ho an'ny famoahana aho dia nanana fahalalana sy fahaizana ampy izay vao nanangana motera mailaka anay izaho sy ny namako iray. Vola vitsivitsy isam-bolana ny vidiny. Mino aho fa ity ny dingana manaraka an'ny MarTech.
Miroborobo izao ny sehatra tsy misy kaody sy tsy misy kaody, ahafahan'ny tsy mpamorona manangana sy mandanjalanja ny vahaolana samirery nefa tsy manoratra kaody tokana. Mandritra izany fotoana izany dia mipoitra isan'andro ireo sehatra marketing vaovao miaraka amin'ny fiasa sy fahaiza-manao izay mihoatra ny sehatra izay mitentina an'aliny dolara bebe kokoa hampiharina. Voagejan'ny rafitra mikolokolo ecommerce toa ahy aho Klaviyo, Moosend, ary Omnisend, ohatra. Afaka nampifangaro sy nanamboatra dia sarotra aho izay nitondra fitomboan'ny isa indroa ho an'ny mpanjifako tao anatin'ny iray andro. Raha niara-niasa tamin'ny rafitry ny orinasa aho, mety ho amam-bolana maro izay.
Lasa sarotra ny manara-maso ny mpanjifa, saingy toy izany ny vahaolana iainan'ny mpanjifa Jebbit dia manome traikefa tsara sy manompo tena ho an'ny mpividy mba hivezivezy amin'ny lalany manokana ary hitondra tena ho amin'ny fiovam-po… miaraka amin'ny cookie an'ny antoko voalohany azo tehirizina sy harahina. Ny ady amin'ny cookies an'ny antoko fahatelo dia tokony hametahana ny pixel an'i Facebook (izany no inoako fa ny tena antony mahatonga an'i Google mandatsaka azy) ka tsy ho afaka hanaraka ny rehetra amin'ny Facebook sy ivelan'ny Facebook ny Facebook. Mety hampihena ny tanjona kendrena Facebook ity… ary mety hampiakatra ny tsenan'ny Google.
Ny sehatry ny fahaizana artifisialy sy ny sehatra fanaovana fanadihadiana avo lenta dia manampy amin'ny fanomezana fomba fijery bebe kokoa momba ny ezaky ny marketing omni-channel sy ny fiantraikany amin'ny dia amin'ny fividianana ankapobeny. Vaovao tsara ho an'ireo orinasa izay mbola manery ny lohany amin'ny toerana handaniany ezaka fatratra hahazoana mpanjifa vaovao.
Tsy futurist aho, fa matoky aho fa arakaraka ny maha hendry ny rafitray sy ny automatique bebe kokoa azontsika ampiharina amin'ny asa mbola azo averina, no ahafahan'ny matihanina amin'ny varotra mandany fotoana amin'ny toerana misy lanja indrindra - amin'ny fampivoarana traikefa mamorona sy manavao izay mitondra fifandonana ary manome lanja ireo prospect sy mpanjifa. Manantena aho fa manome ahy ireto fahaiza-manao manaraka ireto:
Attribution - Ny fahaizana mahatakatra ny fiantraikan'ny fampiasam-bola sy varotra ataoko amin'ny fitazonana ny mpanjifa, ny sandan'ny mpanjifa ary ny fahazoako azy.
Data amin'ny ora tena izy - Ny fahaizana mijery ny hetsika amin'ny fotoana tena izy fa tsy miandry mandritra ny ora maro na andro hanangonana ireo tatitra sahaza mba hahitana sy hanatsara ny ezaky ny varotra ataon'ny mpanjifako.
Fijerena 360-Degree - Ny fahaizana mahita ny fifandraisana rehetra amin'ny prospect na mpanjifa hanompo azy ireo tsara kokoa, hifandray amin'izy ireo, hahatakatra azy ireo ary hanome lanja azy ireo.
Ômnia-Channel - Ny fahaizana miresaka amin'ny mpanjifa amin'ny salantsalany na fantsona tadiavin'izy ireo hampitana azy avy amin'ny rafitra ahafahako miasa ao anatiny mora.
fahiratan-tsaina - Ny fahaizana mandroso mihoatra ny fitongilanan'ny tenako amin'ny maha-mpivarotra azy ary manana rafitra manasaraka, manamboatra ary mamita ny hafatra mety amin'ny fotoana mety mankany amin'ny toerana mety ho an'ny mpanjifako.
Tiako ny maheno ny eritreritrao sy ny hevitrao momba ny Martech: Past, Present, and Future. Nofantsiko io sa lasa lavitra aho? Miankina amin'ny haben'ny orinasanao, ny fahaizany sy ny loharano azonao, azoko antoka fa tsy mitovy amin'ny ahy ny fahitanao azy. Handeha hiasa amin'ity lahatsoratra ity isam-bolana aho mba hitandrina azy hatrany… Manantena aho fa hanampy amin'ny famaritana ity indostria mahavariana ity!
Raha te haharaka an'i Martech ianao dia miasà azafady amin'ny mailakao sy ny podcast-ko! Hahita endrika iray sy rohy ao amin'ny footer ho an'ny roa ianao.
Tags: dokam-barotraAnalyticslehibeContent Marketingfifandraisana amin'ny mpanjifaecommercemailaka Marketingfitantanana hetsikaautomation marketingfitantanana angona datateknolojia marketingMartechtantara martechfampidirana martechstack martechfinday-barotrafifandraisana amin'ny vahoakafitantanana lazaFanamafisana ny varotrascott brinkerSEOSMSSocial Media Marketingfitantanana traikefa amin'ny mpampiasainona ny martech